Howlgal dad badan lagu qabtay oo ka dhacay Suuqa Bakaaraha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Howlgal dad badan lagu qabtay oo ka dhacay Suuqa Bakaaraha
19th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Ciidamada amaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta howlgal ka sameeyey Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, waxaana ay kusoo qab-qabteen in ka badan 40-ruux oo u badan dhallinyaro.
Howlgalkaan oo ahaa mid amniga Suuqa Bakaaraha lagu xaqiijinayay, ayaa waxaa fuliyay ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana ay ka sameeyeen Suuqa gudihiisa, gaar ahaan Sarta Cali Dheere, Nawaaxiga Dahablaha, iyo Suuqa Daawada.
Intii ay ciidamada howlgalka wadeen, waxa ay gacanta kusoo dhigeen dad gaaraya 40-ruux oo uu ku jiro shaqsi hubaysnaa oo watay bistoolad, kaasi oo la sheegay in baaritaan gaar ah lagu haayo.
Howlgalkaan ayaa ahaa mid kedis ah, waxaana uu biloowday saacada markii ay aheyd 10:00 barqanimo xilliga magaalada Muqdisho, waxaana sameeyay howlgalka ciidamada dowladda kaliya.
Gudoomiyaha degmada Howl-wadaag Axmed-Nuur Cabdi Siyaad oo ka hadlay howlgalka manta Suuqa Bakaaraha kasameeyeen Ciidamada amaanka ayaa sheegay in gacanta ku dhigeen dad gaaraya 45-qof kuwaa uu tilmaamay in qaarkood lagu qabtay bistoolado.
Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa sheegay in dadka la qabtay ee la tuhmayo in ay katirsan yihiin Al-Shabaab lagu sameyn doono baaritaano, waxa uuna tilmaamay in lasii deyn doono dadka lagu waayo dambiyada halka kuwa dambiyada lagu helana lasii heyn doono.
Ciidamada dowladda ayaa maalmahan Muqdisho ka weday holgalo amaan oo hubka looga dhigayey dadka sida sharci darrada ah u heysta, waxaana shalay howlgalkii ugu dambeeyey lagu degmada Wardhiigley horjooge ka tirsan burcad badeeda oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Gafaaje iyo hubkiisa.
Dowlada Kenya oo kala xaajoonaysa maamulka Jubba dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida
Talooyin sharci oo Gudiga Joogtada ah ee baarlamanku siiyey wasaarada Amniga